China Oyster Peptide fekitori uye vanotengesa | Huayan
Oyster peptide idiki mamorekuru collagen peptide, inotorwa kubva kune nyowani nyowani kana yechisikigo yakaomeswa oyster neakasarudzika pre-kurapwa uye yakanangwa bio-enzyme digestion tekinoroji pane yakaderera tembiricha. Oyster peptide ine zvisaririra zvinhu (Zn, Se, nezvimwewo), oyster polysaccha anotasva uye taurine, vanoshanda pamwechete kuchengetedza nekusimudzira muviri wedu. Inoshandiswa zvakanyanya mukudya, mishonga uye zvigadzirwa zvehutano
Ruvara: Chiedza cheyero kana Pale poda poda
Mapuroteni: ≥ 60%
Oyster peptide yakakodzera vanhu vasina kusimba, kurovedza muviri vanhu uye vanhu vanonwa doro
Iyo ine kwete chete yakafuma mapuroteni, mavitamini, inoteedzera zvinhu zvine chikamu chakaringana uye taurine, asiwo ine mhando dzakasiyana dzezvinhu zvinovaka muviri izvo zvipuka zvemumvura zvirimo, inogona kuve mhando yezvikafu zvinovaka muviri, kwete chete inogona kukurumidza kunyudzwa nemuviri, uye zvakare kukurudzira iyo kutora mapuroteni amino asidhi uye shuga.
(1) Kuvandudza hutachiona uye kukurudzira metabolism;
(2) Kudzora ropa lipid, kugadzirisa zviratidzo zvehyperglycemia;
(3) Kuchengetedza chiropa uye inhibiting bundu;
(4) Kurerutsa kuneta uye kugadzirisa basa repabonde;
Chengetedza runako uye chengeta hudiki.
1.Iyo kambani yakateedzana ichipfuura akawanda zvitupa senge ISO45001, IS09001, ISO22000, SGS, HACCP, HALAL, MUI HALAL uye FDA. Zvigadzirwa zvedu zvinosangana nezvinodiwa neWHO nematanho emunyika, kunyanya anotumirwa kuEurope, America, Australia, Russia, Japan, South Korea, Singapore, Thailand nedzimwe nyika nenzvimbo muSoutheast Asia.
3.Originate kubva kune hutano Hainan Island, sarudza zvine hutano zvigadzirwa uye shandira pasi.
Pashure: Tilapia Hove Collagen Peptide
Zvadaro: Pea Peptide